Warshadda Soo-saarista - Soosaarayaasha Soo-saarista Shiinaha iyo Alaab-qeybiyeyaal
khudaarta ultrasonic miraha dhirta nidaamka soo saarista
Khudaarta, miraha iyo dhirta kale waxay ka kooban yihiin waxyaabo badan oo waxtar leh oo firfircoon, sida VC, VE, VB iyo wixii la mid ah. Si loo helo waxyaabahan, derbiyada unugyada dhirta waa in la jabiyaa. Soo saarida Ultrasonic waxay cadeysay inay tahay habka ugu wax ku oolka badan. Gariirka degdega ah ee baaritaanka ultrasonic ee dareeraha wuxuu dhaliyaa micro-jet xoog leh, kaasoo si isdaba joog ah ugu dhaca darbiga unugga dhirta si uu u jabiyo, halka walxaha ku jira gidaarka unugyadu ay soo baxayaan. Qalabka ugu muhiimsan ee soo saarista qalabka kala duwan ...
Qalabka soo saarista geedaha Ultrasonic
Daraasaduhu waxay muujiyeen in xeryahooda geedaha waa inay ahaadaan qaab molikuyuullo ah oo lagu nuugo unugyada aadanaha. Gariirka degdega ah ee baaritaanka ultrasonic ee dareeraha wuxuu abuuraa micro-jet xoog leh, oo si isdaba joog ah ugu dhaca derbiga unugga dhirta si uu u jabiyo, halka walxaha ku jira derbiga unuga uu soo baxo. Soo saarista Ultrasonic ee walxaha molecular-ka waxaa loo geyn karaa jirka bini'aadamka qaabab kala duwan, sida ganaaxyada, liposomes, emulsions, kareemada, looshinnada, jel, kiniiniyada, kaabsulka, budada, granules ...